Sida looga saaro hickey | Ragga Caqliga leh
Alicia tomero | 27/09/2021 10:00 | Daryeelka shaqsiyeed, Caafimaadka
Hickey waa astaanta lama -taabtaanka ah ee daqiiqad xamaasad leh. In kasta oo ay u muuqato wax aan la rumaysan karin halkaas siyaabaha iyo siyaabaha looga saaro hickey, maxaa yeelay waxaan hubnaa in mararka qaar aad isku aragtay ballanqaad yar.
Waxay yihiin sumado in sida caadiga ah qoorta ayay ka muuqdaan, xagee saamayn ku yeelatay nuugid ama xoog ku nuug. Waxay u muuqdaan midab guduudan ama midab guduudan oo mugdi ah halkaas oo dhawr maalmood ka dib ay u jeesan doonaan midab xoog yar, si ay ugu baaba'aan midabyo cagaar iyo huruud ah. Ma rabtaa inaad ogaato sida loo sameeyo si dhakhso ah inay u baaba'aan? Si aad u ogaato daawooyinka qaarkood waxaad hoos ka akhrisan kartaa.
1 Sidee u sameysaa hickey?
2 Sideed uga saari kartaa ama uga saari kartaa hickey?
3 Sideen u dabooli karnaa hickey
Sidee u sameysaa hickey?
Dareen xamaasad leh oo ka baxsan gacanta waxay ka dhigtaa dhunkashooyinkaas inay noqdaan qoorta qoorta. Dhunkashooyinkaas ayaa noqda wax nuugista aagga dhowr ilbidhiqsiyo, halkaas oo calaamadihii horeba ka muuqan doonaan. Dameeraha waxay ku xirnaan doontaa nooca xoogga kaas oo la isticmaalay iyo haddii ilkaha la isticmaalay.
Marka si adag loo nuugo aaggan jilicsan, xididdada maqaarka hoostiisa way jebiyaan. Marka la abuuro xoogaa xoogaa ah, waxaa jira dad aad ugu nugul nabar.
Sideed uga saari kartaa ama uga saari kartaa hickey?
Waa inaad ogaataa in digaaggu kaligiis iska tago, in kastoo waxay qaadan doontaa maalmo yar in la isku beddelo. Waxay caadi ahaan qoorta ka muuqdaan wax ka yar toddobaad, laakiin sidoo kale waxay socon karaan ilaa 15 maalmood. Looma baahna in la walwalo haddii aad u malaynayso inay tahay wax xun, maadaama aysan macnaheedu ahayn tilmaamidda nooc ka mid ah jirrada iyo cudurrada. Waa intaas uun aad bay muhiim u yihiin una muuqdaan isagoo ka soo muuqday meel aad u muuqda. Soo hel talooyin si aad u ogaato sida looga takhaluso:
Waqtiga ama sida ugu dhaqsaha badan ku samee duugis dabacsan halka aad ku casaysay. Waxay la mid tahay markaad xisaabinayso in nabar ama hematoma ay ka soo muuqan doonto jug. Haddii aad si tartiib ah ugu xoqdo aagga si duugis ah, waxaad haysataa fursad kasta oo aysan tani u kici doonin ama lagu gaari karin.
Dhigista wax qabow sida baraf ama baakad qabow intaanay muuqan. Saamayntiisu waxay yareyn doontaa saamaynteeda maadaama xididdada dhiiggu ciriiri yihiin sidaa darteedna uma oggolaanayso inay ku dhawaaqdo midabkaas guduudka ah. Si aad isaga ilaaliso qabowga barafka, ku duub maro.
Dawada ilkaha Waxay sidoo kale ku shaqeysaa saameynta qabow ee maaddooyinka ay ka kooban tahay, waad codsan kartaa oo si tartiib ah u duug aagga si hantidiisu u dhex gasho. Waxaad sidaas oo kale ku samayn kartaa baakadaha infusions ku salaysan reexaanta. Saar bacda dhowr daqiiqadood oo dul saar aagga si hantidiisu u dhaqan gasho.
Kareemka dhiigbaxa Waxa kale oo ay u shaqaysaa, maadaama ay leedahay qaybo ka-hortagga bararka oo dardar geliya lumitaankiisa. Waxaad marsataa waxoogaa kareem ah aagga iyo duugista dhowr jeer maalintii. Kareemka noocan oo kale ah ayaa sidoo kale loo aqoonsaday inuu yahay mid aad waxtar u leh ka takhalusidda wareegyada madow ee dilaaga ah.
Codso kuleylka marka hickey soo muuqdo. Dooro cadaadis diiran oo ku dabaq aagga dhowr daqiiqo. U oggolow kuleylka inuu dhex galo si uu uga caawiyo weelasha inay furmaan oo ay ka caawiyaan guduudku inuu si dhaqso ah u bakhtiyo.
Kareemka ku salaysan Arnica aad bay u shaqaysaa Waa inaad ku qaadataa aag yar oo duugis ah si loo soo bandhigo. Maaddadan waxaa loo isticmaalaa in lagu bogsado oo lagaga hortago nabar. Aad bay waxtar u leedahay waxaana si weyn loo adeegsadaa marka carruurtu garaacdo daran.
Khamriga Waa mid kale oo ka mid ah daawooyinka ka shaqeeya yaabab. Waa inaad daaweysaa wakhtiga ay dhacday oo aad ku dabaqdo adigoo siinaya duugitaan wareeg ah isla jihada. Markaa waxaad ku celin doontaa isla duugitaan wareeg ah, laakiin jihada kale. Dhab ahaantii waa mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan, laakiin xusuusnow inay tahay inay ahaato ka hor intaanay muuqan.
Aloe Vera waa warshad aad u fiican oo lagu dabaqo xanuuno badan oo maqaarka ah. Gaar ahaan, waxay leedahay astaamo ka hortag ah oo ka caawin kara dejinta aagga iyo bararka. Waxaad isticmaali kartaa jel -ka ay geedka ka kooban tahay, waxaad gelineysaa jelka aagga laba ilaa saddex jeer maalintii.
Sideen u dabooli karnaa hickey
Haddii aadan awoodin inaad bixiso qayb ka mid ah dhammaan daawooyinka aan ku tusnay, waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah talooyinkan si aad u awooddo inaad qariso:
Waxaad awoodi kartaa codso concealer si ay u daboosho midabkeeda. Waa inaad doorataa midabka iyadoo ku xiran hadba maqaarkaaga, laakiin haddii uu aad u guduudan yahay ama mugdi yahay, waa inaad marka hore isticmaashaa qarsoon cagaar ah oo si aad u fiican u qariya midabkiisa. Waxaad u oggolaan doontaa inuu engego ka dibna waxaad ku darto qurxinta midabka maqaarka.
Daaweyn kale oo marmar la isticmaalo ayaa ah ku dabool aagga turtleneck, Xitaa haddii ay tahay xagaaga, waxaa jira funaanado gaagaaban oo qoorta sare ku jirto. Plugins kale oo aad isticmaali karto waa garbaha ama garbaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida loo saaro hickey
Sida loo shukaansado gabadh
Sida Loo Xoojiyo Quadriceps -kaaga